Qabriga maryo Global Suuqa Makiinado si ay u koraan at CAGR a of 8,28% muddada 2018-2022.
Global qabriga maryo Makiinado Market The 2018-2022, ayaa la diyaariyey oo ku salaysan falanqaynta ah suuqa qoto-dheer la gashiga ka khubarada warshadaha. Warbixintu waxay dabooshaa muuqaalka suuqa iyo fursadaha kobcitaanka ay sanadada soo socda. Warbixinta ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah wada hadal ah iibiya muhiim ah oo ka hawlgala suuqa this.
Sida ku cad warbixinta, darawalka mid ka mid ah suuqa this saameyn waa baahida baxna waayo, dhar non-leh tolmo wanaagsan. difaan Nonwoven waxaa danbeeyay alaabta marada in ay yihiin oo ka soo jeeda fiiloyin caadiga ah gaaban ama macdantaa oo dheer, iyadoo la isticmaalayo kiimikada ama lagala kulmo farsamo farsamooyinka, iyo waxaa mana leh tolmo wanaagsan mana knitted. difaan Non-dhar waxaa soo saaray by geeddi-xawaaraha sare oo qiime jaban.
Mid ka mid ah arrimuhu suuqa this saamaynaya waa qalabaynta ee mashiinada dharka. Qalabaynta kaalin muhiim ah hagaajinta tayada iyo qiimaha-tartanka saarka dharka. Iswada mishiinada dharka dedejisaa saarka dharka iyo kordhiyaa heerka socodka of dhar ah, oon awood saarka caatada ah. Qalabaynta door aad u weyn ee wax soo saarka fiber, wax soo saarka dun, jare, dyeing, iyo geedi socodka dhameystir.
Dheeraad ah, warbixintu waxay sheegaysaa in mid ka mid caqabad suuqa this saamaynaya waa qiimaha suuf sare saameeya warshadaha fur. Cotton waa mid ka mid ah waxyaabaha aasaasiga ah sida xawliga ah u warshadaha fur ah. Kororka sicirka suuf saamayn ku warshadaha dharka ee ku saabsan oo dhan.